Sida loo qiyaaso kumbuyuutarrada Khariidadaha Google iyadoo la adeegsanayo Live View AR oo leh meel sax ah oo aad u sarreeya | Androidsis
Sida loogu qiyaaso kumbuyuutarka Khariidadaha Google iyadoo la adeegsanayo Live View AR oo leh saxnaan goobta aad u sarraysa
Maanta taas waan ognahay Qariiradaha Google waxay isticmaaleysaa Live View AR Augmented Reality si loo qiyaaso Dejinta deegaanka; mid ka mid ah sheekooyinka ugu caansan ee barnaamijka khariidadaha isla markaana yimid sanadkii hore si loo helo tilmaamaha kamaradda taleefanka.
Waxaan horey u ogaanay taas Big G wuxuu lahjadda ku dhejiyay waaya-aragnimada dhabta ah sida Google Lens. Waxay ku jirtaa Qariiradaha Google halkaasoo uu sidoo kale ka shaqeynayo inuu naftiisa ka caawiyo inuu hagaajiyo khibrada isticmaale ee barnaamijkan weyn ee aan ku hayno badhanka badhanka.
1 Ku hagaaji saxsanaanta goobtaada Khariidadaha Google
2 Sida loo shaandheeyo khariidadaha Khariidadaha Google oo leh Live View AR
Ku hagaaji saxsanaanta goobtaada Khariidadaha Google
Sida muuqata, Google waxay aaminsan tahay in GPS ma bixiso khibrada lagama maarmaanka u ah jawiga magaalooyinka 'cufan' iyo meelaha faragelinta badan lagu hayo dhismayaasha. Xalkan oo lagu siiyay xaqiiqda 'Augmented Reality' ayaa muuqaal ahaan go'aamisa halka uu ku yaal magaalooyinkaas halka GPS-ka si xun ugu fashilmay.
Waxay u shaqeysaa sidan oo kale in markii Live View laga bilaabay khariidadaha Google, waxaa naloo weydiiyay inaan tilmaan ka bixinno dhismayaasha, calaamadaha waddooyinka ama noocyada kale ee walxaha magaalooyinka ee aan agtaada ku haysanno. Sababta tan ayaa ah inaan isku dayno inaan ogaano jihada aan raadineyno.
Horey waad u ogayd in lagu qiyaaso Khariidadaha Google markasta Wuxuu codsaday dhaqdhaqaaqaas 8 oo mobilka kujira iyo in marar badan ay u muuqato in aysan xitaa shaqeyneyn. Marka hadda Khariidadaha ayaa noo oggolaanaya "in lagu waafajiyo Muuqaalka Tooska ah" si loo wanaajiyo saxnaanta bartaas oo ku jirta buluug Khariidadaha Google.
Sidaad u baahan tahay inaad ogaato, barta calaamadeynaysa meesha aan ku yaalay Khariidadaha Google waxay leedahay dogob buluug ah taasi waxay tilmaamaysaa jihada aan wajahayno, iyo sida balaca dhaldhalaalkaasi u saxsan yahay meesha aan ku suganahay. Alwaaxyada yaryar waxay muujinayaan saxsanaanta weyn.
Sida loo shaandheeyo khariidadaha Khariidadaha Google oo leh Live View AR
Doorashadan waa inay horey ugu laheyd khariidadaha Google, sidaas waxaan ku tusineynaa tillaabooyinka lagu miisaamayo si sax ah u wareegto oo markaa aad u saxsanaato markaad ku dhex socoto jawi magaalo.
Waxaan furaynaa Khariidadaha Google
Waxaan sifiican uheelnaa GPS-ka
Hadda waxaan raadineynaa mowqifkeena waxaanuna arki doonaa dogobkaas oo buluug ah tilmaamaysa jihada aan eegayno. Xaqiiqdii waa mid aad u ballaaran
Guji barta wareega buluuga ah
Liis buluug ah ayaa lagu furaa xulashooyin kala duwan sida keydinta goobta gawaarida la dhigto iyo tan na xiiseysa
Waxaan riixnaa ku saabsan "Ku calibratee Muuqaalka Tooska ah"
Google Maps na codso rukhsad aad ku isticmaali karto kamaradda taleefanka oo markaa aad awood u leedahay inaad ku isticmaasho waayo-aragnimada Dareen dhab ah ee isku mid ah
Oggolaansho la siiyay waxaan hiigsaneynaa dhisme ama cunsur magaalo oo la aqoonsan karo by Sirdoonka Artificial ee Khariidadaha Google
Kuwii caadaystay inay isticmaalaan Ar Core way arki doonaan kuwa qodobada kaladuwan ee ka soo baxa dhismaha oo dhan si loo ogaado deegaanka aan ku tilmaameyno kamaradda
Haddii aysan aqoonsan dhisme kasta, waxay ka dhigan tahay inaan wax qaldan sameyneyno iyo in darbiga maran uusan waxba ka tareynin
Waxaan mar labaad ku tilmaameynaa kamaradda qayb gaar ah deegaankayaga
Hadda waa inay sax ahaato oo la aqoonsado halkaad tilmaamayso
Diyaar waan arki karnaa sida ku cad farriinta barta buluugga ah ee noo ah saxnaanta Khariidadaha Google aad ayey u sarreeysaa
Xulashadaan Muuqaalka Tooska ah ayaa loo heli karaa dhammaan mobiladaas oo la jaan qaadi kara AR Core, Android Augmented Reality waana in ay dad badani heli karaan. Hab fudud oo loo maro cadee goobta iyo khariidadaha Google ayaa na siinaya tixraacyo wanaagsan markaad ku dhex socoto magaalooyinka sida caadiga ah oo ay adag tahay inaad jiidato GPS; inta aan sugeyno codkaas cusub ee dhowaan ku soo wajahan Khariidadaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » Sida loogu qiyaaso kumbuyuutarka Khariidadaha Google iyadoo la adeegsanayo Live View AR oo leh saxnaan goobta aad u sarraysa
Apollo Bold, sameecadaha dhagaha ee cusub oo wata buuq firfircoon oo laga joojiyay shirkadda Tronsmart
Sida loo siiyo bandwidth dheeri ah ciyaaraha MIUI si loogu helo xiriir wanaagsan oo internetka ah